Izahay ServiMatango C.A. = Services Matango
Servimatango C.A. dia ny orinasa natokana ho fanampiana ny olona sy ny orinasa mba mamorona sy hampitombo ny raharaham-barotra amin'ny aterineto.
Isika dia nanao raharaham-barotra orinasa amin'ny alalan'ny aterineto amin'ny foibe any an-tanànan'i Ibarra-Imbabura-Ekoatera. Dia mifantoka amin'ny fanomezana ny asa fanompoana Vermietung lohamilina natokana ho an'ny VoIP, mampiantrano, Domain sy ny vahaolana ho nomerika ny mpampiasa mampiasa ny Web.
Tsy mijanona eto anilan'ny ny iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny fampidirana vaovao mpifaninana lafin-javatra malefaka sy famoronana asa, mitambatra amin'ny fanompoana manokana, ny ekipa ny asa manokana, tsara dia tsara ny vondrona ny mpiara-miasa, matihanina fanohanana ara-teknika sy ny kalitao ambony fanompoana ho an'ny mpanjifa.
Tsy manolotra ny mpanjifa ny fahafahana mamorona sy hampivelatra mahomby orinasa izay anjara amin'ny fitomboana ara-toekarena amin'ny alalan'ny fanomezana ny iraisam-pirenena ny tolotra Internet tandrify teknolojia toetra, notohanan'ny manam-pahaizana manokana ny tsara indrindra eto an-tany.
Ampitomboy ny laza sy ny fankatoavana iraisam-pirenena ho ny fanomezana asa tsara avo, teo am-lohalaharana ny foto-drafitrasa sy ny tena ny tsara indrindra eo amin'ny fanompoana sy ny fanofanana ny olona talenta.
Nisy fotoana lasa izay tao amin'ny faritanin'i Imbabura; Franklin mpahita lehibe roa sy nanapa-kevitra ny handeha Nelly ny hevitra lehibe: 'Aoka fa Ibarra-Ekoatera afaka manao zava-dehibe ".
Ary toy izany koa nanomboka ny lalana ho amin'ny fahombiazana: fampiharana in 2008, fanompoana Rent / Vermietung ServerVoip.com Servers; manampy ny olona sy ny orinasa mba mamorona sy hampitombo ny raharaha Internet Telephony (VoIP) ary tanana tamin'ny Alosip.com, mba hanome minitra ny antso ny aterineto.
Noho ny fitohizan'ny fitomboan'ny ireo tolotra, Nanapa-kevitra ny hanangana ny orinasa sy ny ara-dalàna voasoratra ny anarana: Matango Services Company Limited “ServiMatango C.A”.
Started asa in 2012 miaraka amin'ny tanjona ny hanome asa ny olona maro sy ny orinasa mba hahafahany mamorona sy mampitombo ny raharaha aterineto na aiza na aiza eto an-tany. Tsara homarihina fa, fanofana lohamilina amin'ny VoipSwitch sehatra ho fampiharana ny Internet antso service, Izany dia ny atiny lehibe ny orinasa.
Healthy miasa Environment
I, Franklin kôkômbra:
“Te-haneho ny mpiray tanindrazana, mba hahomby eo amin'ny fiainana dia tsy mila nifindra monina any amin'ny firenen-kafa. Eto in Ekoatera, na ao amin'ny firenena izay mitoetra amin'izy fiara, fianarana, tapa-kevitra sy ny hafanam-po; miaraka amin'ireo faniriana ihany izay azonao rehefa ivelany ianao azonao tratrarina zava-dehibe”.
S Tonga soa eto amin'ny ServiMatango.com: Meet ny Team
Izahay dia ekipa ny fiofanana fatratra sy manokana matihanina amin'ny faritra isan-karazany: teknolojia, rindrambaiko, fampandrosoana, marketing, e-barotra, famolavolana, fanohanana ara-teknika sy ny asa fanompoana amin'ny mpanjifa ny fahalalana ilaina mba hihaona fanompoana fangatahana.
Manome torohevitra feno, no nanampy sanda mahatonga ny mpanjifa mbola nifidy antsika.
Marketing sy ny Sales
Miarahaba Izaho no Franklin Matango, Dia niara-niasa tamin'ny ServiMatango sy manolo-tena ho fanampiana ny olona sy ny orinasa mba hamorona sy hampivelatra orinasa an-tserasera.
“I manolotra torohevitra feno ny olon-tsotra sy orinasa eo amin'ny famoronana sy ny fampandrosoana raharaha aterineto”.
Hi Nelly aho Matango, Dia niara-niasa tamin'ny ServiMatango sy manolo-tena ho fanampiana ny olona sy ny orinasa mba hamorona sy hampivelatra orinasa an-tserasera.
“I mitantana ary mifehy ny harena ilaina ho amin'ny araka ny tokony ho fampandehanana ny raharaha aterineto”.
Hi aho Andrea Maldonado, Dia niara-niasa tamin'ny ServiMatango sy manolo-tena ho fanampiana ny olona sy ny orinasa mba hamorona sy hampivelatra orinasa an-tserasera.
Hi Fernando aho Molina, Dia niara-niasa tamin'ny ServiMatango sy manolo-tena ho fanampiana ny olona sy ny orinasa mba hamorona sy hampivelatra orinasa an-tserasera.
“Nanome toro-hevitra ara-teknika manokana ao amin'ny aterineto raharaha”.
Miarahaba Izaho no Jessenian Tequiz, Dia niara-niasa tamin'ny ServiMatango sy manolo-tena ho fanampiana ny olona sy ny orinasa mba hamorona sy hampivelatra orinasa an-tserasera.
“Hanana mamorona hevitra amin'ny aterineto raharaha”.
Hi aho Cedeño Angel, Dia niara-niasa tamin'ny ServiMatango sy manolo-tena ho fanampiana ny olona sy ny orinasa mba hamorona sy hampivelatra orinasa an-tserasera.
“Fampivelarana Software mba automate dingana mpandraharaha amin'ny aterineto”.
Our Services: tsindrio eto